Imibhalo nge Alexander García-Tobar
Lo bhubhane ukhulise isidingo sokuthi wonke umnyango ngaphakathi kwenhlangano unake kakhulu ukuphepha kwe-inthanethi. Lokho kunengqondo, akunjalo? Uma sisebenzisa ubuchwepheshe obuningi ezinhlelweni zethu nasemsebenzini wansuku zonke, singaba sengozini enkulu yokwephulwa. Kepha ukwamukelwa kwezinqubo ezingcono ze-cybersecurity kufanele kuqale ngamaqembu okuthengisa awazi kahle. I-Cybersecurity ibilokhu ikhathaza abaholi be-Information Technology (IT), i-Chief Information Security Officers (CISO) kanye ne-Chief Technology Officers (CTO)